Best Rest - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဆေးရုံတှေ သှားတိုငျး နောကျမှီလေးတှနေဲ့ လူနာတှေ တှတှေ့နေ့ရေပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့ နောကျမှီလေးတှနေဲ့ ဖွဈနရေတာပါလဲ?
နောကျမှီ နဲ့ နရေတဲ့ လူနာအမြားစုဟာ လှဲအိပျလို့ မရတဲ့ လူနာတှပေါ။ သူတို့ဟာ လှဲအိပျရငျ မှနျးတတျကွပါတယျ။ အဓိကအားဖွငျ့ နှလုံးအမောဖောကျပွီး အဆုတျကို ရလှေမျးတဲ့ လူနာတှဟော လှဲမအိပျနိုငျလို့ နောကျမှီလေးတှနေဲ့ နကွေရပါတယျ။ သူတို့ဟာ နှလုံးက ညှဈအား မကောငျးတဲ့အတှကျ အဆုတျထဲမှာ သှေးရညျကွညျတှေ ဖုံးလာတတျပါတယျ။ ဒီလို ရောဂါရှငျတှဟော လှဲအိပျလိုကျရငျ နှလုံးကို သှေးပွနျတဲ့ပမာဏမြားပွိး ပိုပို မောလာတတျလို့ ညဘကျဆို ငုတျတုတျကလေးတှေ အိပျကွရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နောကျမှီလေးနဲ့မှ အဆငျပွပေါတယျ။
တဈခါ နှလုံးကို အရညျဖိတဲ့ လူနာတှေ (Cardiac temponade)၊ အခြို့ မှေးရာပါ နှလုံးဝဒေနာရှငျတှေ၊ နှလုံးအဆို့ရှငျ အရမျးကဉျြးသှားတဲ့လူနာတှလေညျး ဒီလို အခွအေနမြေိုး ဖွဈတတျပါတယျ။
နောကျ အဆုတျ ဝဒေနာရှငျ အခြို့လညျး တူတူပါပဲ။ သူတို့ကတော့ လှဲအိပျလိုကျရငျ ကွပျသလို ခံစားရပွိး လှဲမအိပျနိုငျကွပါဘူး။ နောကျမှီလေးနဲ့မှ နသောထိုငျသာ ရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ တဈခါတဈလေ နောကျမှီနဲ့ ထိုငျနတော စတိုငျထုတျနတော မဟုတျပါဘူး။ လူနာရဲ့ ပငျပနျးမှု နဲ့ ရောဂါဒဏျခံရမှု အခွအေနတှေကေို ပွနပေါတယျ။
လူနာပွုစုတော့မယျ ဆိုရငျလညျး နောကျမှီတဈခုတော့ ကောငျးကောငျး သုံးတတျဖို့ လိုပါတယျ။ တှတှေ့ခေ့ငျြးတော့ ဘာကွိးမှနျး မသိပမေယျ့ သုံးတတျသှားရငျ Dreambed လိုပါပဲ။ သူက အရငျဆုံး ကြောမှီမယျ့နရောကို လူနာဘကျကိုထားပွီး အောကျဘကျက လကျတံကို ဖှငျ့ခရြပါတယျ။ အဲဒီလကျတံမှာ ပကျလကျကုလားထိုငျမှာလို အထဈလေးတှေ ပါပါတယျ။ အဲဒီ အထဈလေးတှထေဲက လူနာနဲ့ သငျ့တျောမယျ့ အထဈထဲကို နောကျလကျတံကို အံခရြတာပါ။
လူနာ နားနဖေို့ဆိုရငျ ၄၅ ဒီဂရီက အကောငျးဆုံးပါ။ ဒါပမေယျ့ လူနာက သိပျမောနရေငျ တို့၊ ထမငျးစားဖို့တို့ဆို ဒီ့ထကျ မတျလို့ ရပါတယျ။
ဆေးရုံတွေ သွားတိုင်း နောက်မှီလေးတွေနဲ့ လူနာတွေ တွေ့တွေ့နေရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ နောက်မှီလေးတွေနဲ့ ဖြစ်နေရတာပါလဲ?
နောက်မှီ နဲ့ နေရတဲ့ လူနာအများစုဟာ လှဲအိပ်လို့ မရတဲ့ လူနာတွေပါ။ သူတို့ဟာ လှဲအိပ်ရင် မွန်းတတ်ကြပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် နှလုံးအမောဖောက်ပြီး အဆုတ်ကို ရေလွှမ်းတဲ့ လူနာတွေဟာ လှဲမအိပ်နိုင်လို့ နောက်မှီလေးတွေနဲ့ နေကြရပါတယ်။ သူတို့ဟာ နှလုံးက ညှစ်အား မကောင်းတဲ့အတွက် အဆုတ်ထဲမှာ သွေးရည်ကြည်တွေ ဖုံးလာတတ်ပါတယ်။ ဒီလို ရောဂါရှင်တွေဟာ လှဲအိပ်လိုက်ရင် နှလုံးကို သွေးပြန်တဲ့ပမာဏများပြိး ပိုပို မောလာတတ်လို့ ညဘက်ဆို ငုတ်တုတ်ကလေးတွေ အိပ်ကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်မှီလေးနဲ့မှ အဆင်ပြေပါတယ်။
တစ်ခါ နှလုံးကို အရည်ဖိတဲ့ လူနာတွေ (Cardiac temponade)၊ အချို့ မွေးရာပါ နှလုံးဝေဒနာရှင်တွေ၊ နှလုံးအဆို့ရှင် အရမ်းကျဉ်းသွားတဲ့လူနာတွေလည်း ဒီလို အခြေအနေမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
နောက် အဆုတ် ဝေဒနာရှင် အချို့လည်း တူတူပါပဲ။ သူတို့ကတော့ လှဲအိပ်လိုက်ရင် ကြပ်သလို ခံစားရပြိး လှဲမအိပ်နိုင်ကြပါဘူး။ နောက်မှီလေးနဲ့မှ နေသာထိုင်သာ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ခါတစ်လေ နောက်မှီနဲ့ ထိုင်နေတာ စတိုင်ထုတ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူနာရဲ့ ပင်ပန်းမှု နဲ့ ရောဂါဒဏ်ခံရမှု အခြေအနေတွေကို ပြနေပါတယ်။
လူနာပြုစုတော့မယ် ဆိုရင်လည်း နောက်မှီတစ်ခုတော့ ကောင်းကောင်း သုံးတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ တွေ့တွေ့ချင်းတော့ ဘာကြိးမှန်း မသိပေမယ့် သုံးတတ်သွားရင် Dreambed လိုပါပဲ။ သူက အရင်ဆုံး ကျောမှီမယ့်နေရာကို လူနာဘက်ကိုထားပြီး အောက်ဘက်က လက်တံကို ဖွင့်ချရပါတယ်။ အဲဒီလက်တံမှာ ပက်လက်ကုလားထိုင်မှာလို အထစ်လေးတွေ ပါပါတယ်။ အဲဒီ အထစ်လေးတွေထဲက လူနာနဲ့ သင့်တော်မယ့် အထစ်ထဲကို နောက်လက်တံကို အံချရတာပါ။
လူနာ နားနေဖို့ဆိုရင် ၄၅ ဒီဂရီက အကောင်းဆုံးပါ။ ဒါပေမယ့် လူနာက သိပ်မောနေရင် တို့၊ ထမင်းစားဖို့တို့ဆို ဒီ့ထက် မတ်လို့ ရပါတယ်။